မတရား ခိုင်းစေခြင်းကြောင့် ဟုဆိုကာ ထိုင်းလုပ်ငန်းခွင်များမှ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ၁ဝဝ ကျော် - Yangon Media Group
မြဝတီ၊ ဒီဇင်ဘာ ၇
မတရားခိုင်းစေ ခြင်းကြောင့်ဟုဆိုကာ ထိုင်းရှိ ရေလုပ်ငန်းစက်ရုံနှင့် ဈေးဆိုင်တို့တွင် လုပ်ကိုင် နေသည့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ၁ဝဝ ကျော် အစုလိုက်အပြုံလိုက် နေရပ်သို့ပြန်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ၎င်းအလုပ်သမားများသည် ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်တွင် မြဝတီမြို့သို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းလုပ်သားများထဲတွင် CI ကတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူ၊ အ ထောက်အထားမဲ့လုပ်သားနှင့် MoU လုပ်သားတို့ပါဝင်ကြောင်း မဟာချိုင်အ ခြေစိုက် AAC အဖွဲ့မှ သိရသည်။
၎င်းတို့သည် ထိုင်းနိုင်ငံ မဟာချိုင်ရှိ ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် စက်ရုံများ၊ ဈေးဆိုင်များစသည့် လုပ်ငန်းတို့တွင် လုပ်သက်တစ်နှစ်၊ နှစ်နှစ်၊ လေးနှစ်အစ ရှိသဖြင့် လုပ်ကိုင်လာသည့် လုပ်သားများ ဖြစ်ကာ အလုပ်သမားအခွင့်အရေး အ ပြည့်အဝမရရှိခြင်းကြောင့် မိမိတို့သဘော ဖြင့် နေရပ်ပြန်ရန် အလုပ်သမားတစ်ရာ ကျော် စုပေါင်းထွက်ခွာလာကြခြင်းဖြစ် ကြောင်း AAC အဖွဲ့နှင့် နေရပ်ပြန်ရခိုင် တိုင်းရင်းသားတို့ထံမှသိရသည်။ ”ကျွန်တော်က ဘန်ကောက်မြို့အနီး ဖက်လန်ဆောင်မြို့က ငါးစက်ရုံမှာ လုပ်တာပါ။ လုပ်သက်ကတစ်နှစ်ကျော် ပါပြီ။ အလုပ်ရှင်က ကျွန်တော်တို့ကို လူလို့တောင်မသတ်မှတ်ဘူးဗျာ၊ အလုပ်ကို ညနေ ၄ နာရီကဆင်းရပြီး မိုးလင်းအထိ အလုပ်လုပ်ရတယ်။ ထမင်းစားချိန်လည်း ဆယ်မိနစ်ပဲပေးတယ်။ အချိန်ပိုခိုင်းရင်းလည်း အချိန်ပိုကြေးမပေးဘူး။ နေမကောင်း လို့ အလုပ်မဆင်းနိုင်ရင် ထွက်ခိုင်းတယ်။ သူတို့ကအရင်းရှင်ဆန်လွန်းတယ်” ဟု ထိုင်းမှ နေရပ်ပြန်လာသူ ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ မှ မောင်မြခင်က ပြောသည်။
လုပ်ခလစာကို ဘတ် ၃ဝဝ ပေးထားသည်ဆိုသော်လည်း အဆောင်ခ၊ ထမင်းဖိုး၊ နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ပြုလုပ်ခ များ ဖြတ်တောက်ခံရကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် လုပ်အားခသည် ဘဲစားဘဲချေသာဖြစ်သ ဖြင့် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လိုစိတ်မရှိခြင်း ကြောင့် အားလုံးစုပေါင်းကာ ထွက်လာ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့ အားလုံးနေရပ်သို့သာ ပြန်မည်ဖြစ်ကြောင်း လုပ်သားတို့ကဆိုသည်။ ယခုနေရပ်ပြန်လာသည့် လုပ်သားများသည် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေ၊ မင်း ပြား၊ အမ်း၊ မြေပုံ စသည့်မြို့များမှဖြစ်သည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အလုပ်သမား ညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန မြဝတီမြို့ ကျောက်လုံးကြီးစခန်းမှ တာဝန်ခံဦးစီး အရာရှိ ဦးသန်းထိုက်က ” အခုလို အလုပ်မလုပ်ချင်လို့ ပြန်လာတဲ့သူတွေကို ကျွန် တော်တို့ ပြန်လည်ကြိုဆိုရေးစခန်းက တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ခက်တယ်ဗျ။ ကျွန်တော်တို့စခန်းက အထောက်အထား မရှိဘဲပြန်လာသူတွေ၊ အဖမ်းခံရလို့ပြန်လာသူတွေကိုသာ လက်ခံဆောင်ရွက် ပေးတာဖြစ်ပါတယ်” ဟုဆိုသည်။ ယင်းကြောင့် အဆိုပါလုပ်သားများ ကို မြဝတီမြို့ရှိ ကြိုဆိုရေးစခန်းတွင် လက်မခံထားဘဲ ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်နေ့ ညတွင်း ချက်ချင်းပင် မြဝတီမြို့ ခရိုင်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ အကူအညီဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။
ZCH၊ KKTM (MWD)
ကမ္ဘောဒီးယား အစိုးရက အတိုက်အခံများကို နှိမ်နင်း၍ အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ ကမ္ဘောဒီးယားများ ဝင်ခွ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်ဝင်း ကိစ္စမှာ အဂတိ လိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်၏ လုပ်ငန်းစ??
လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်းက ၇၂ နာရီအတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသနှင့် ရခိုင်ပြည်န??
ပရီးမီးယားလိဂ်၏ ထောက်ပံ့အားပေးမှုကို စပါးနောက်ခံလူ ဒန်နီရို့စ် အလိုရှိ
မဟာမုနိ ဘုရားကြီး အကြိမ်(၉ဝ)မြောက် ဝါဆိုခြင်း အလှခတ်ပွဲတော်တွင် ခြင်းသမိုင်းပြခန်း ဖွင့်လှ